at 5:23 PM Labels: ရိုးရာအစားအစာ
ကျွန်မရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ ကျွန်မ မောင်နှမတွေကို နှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲလေး လုပ်ကျွေးပါရစေနော်။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲလို့ဆိုပေမယ့် ခေါက်ဆွဲဖတ်မကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကြာဇံဖတ်နဲ့လည်း အစားထိုးပြီး လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲအတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့ ၀က်/ကြက်/ဘဲ ကြိုက်နှစ်သစ်ရာအသား၊ ကော်မှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ မုန်ညင်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ တရုတ်နံနံ၊ ဆား၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်၊ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ငါးပိစိမ်းစားနဲ့ သံပုရာသီးတို့ပါနော်။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ အသားအရိုးတွဲလျက်ကို သန့်စင်အောင်ရေဆေးပြီး အတုံးခပ်ကြီးကြီးတုံးပြီး ဆား၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်၊ ချင်းထောင်းရည်တို့နဲ့နယ်ပြီး ခဏနှပ်ထားပေးပါနော်။ ပြီးတော့မှ အိုးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး အသားတွေကိုထည့်၊ ရေကိုလည်း အသားမြုပ်ရုံထည့်ပြီး ပြုတ်ပေးထားပါနော်။
ပထမတစ်ရေခမ်းလောက်ပြီဆိုရင်တော့ အသားတွေကို ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးတော့ ရေထပ်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ။ အသားနူးလောက်ပြီဆိုရင်တော့ အိုးထဲကနေ အသားတွေကိုဆယ်၊ အအေးခံပြီး အသားနွှင်ပေးထားပါနော်။ ကော်မှုန့်ကိုတော့ စားမယ့်လူရယ်၊ ကော်ရည်အပျစ်အကျဲအကြိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဖျော်ပေးပါနော်။ ကော်မှုန့်ဖျော်တဲ့အခါမှာ ဆား၊ သကြားနဲ့ အချိုမှုန့်လေးနည်းနည်း ထည့်ဖျော်ပေးပါ။ မုန်ညင်း၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ပန်းဂေါ်ဖီတို့ကိုလည်း ရေနဲ့သေသေချာချာ အထပ်ထပ်ဆေးပြီး လှီးချွတ်ရေစစ်ထားပေးပါနော်။ ငါးပိစိမ်းစားကိုလည်း မီးလေးအုံးထားပေးပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်း ရေဆေးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနီတို့ကိုလည်း အခွံနွှာပြီး ဆီချက်ချက်ဖို့ ပါးပါးလှီးပေးထားပါ။
ခေါက်ဆွဲပြုတ်ခြင်းအားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အိုးတစ်လုံးထဲ ရေထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ရေနွေးအိုးတည်ပါ။ ရေနွေးဆူပြီဆိုရင် ခေါက်ဆွဲ/ကြာဇံကို ပြုတ်ပေးပါ။ အကျက်လည်းညီစေ၊ ပျော့လည်းမပျော့စေအောင် သတိထားပြီး ပြုတ်ပြီးရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်အိုးကိုချပြီး ရေသွန်ပါ။ ခေါက်ဆွဲတွေကို စကာနဲ့ စစ်ယူပြီး ရေအေးအေးနဲ့ သေသေချာချာနှံ့စပ်အောင် ဆေးပေးပါ။ ပြီးတော့မှ စကာနဲ့ ရေစစ်ထားလိုက်ပါနော်။ ပဲပင်ပေါက်ကိုလည်း ရေနွေးဖျောပြီး ရေစစ်ထားပေးပါနော်။ဟင်းရည်အိုးတည်ခြင်းအသားနွှင်ထားပြီးတဲ့ အရိုးတွေကို ငရုတ်ဆုံထဲ မညက်တညက်ထည့်ထောင်းပြီး အရိုးတွေကို ဇလုံးထဲထည့်ပြီး အရိုးထောင်းရေကို အိုးတစ်လုံးထဲ စစ်ယူပါ။ ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီအရိုးရေထဲကို ဆား၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ပေးဆူပါနော်။ ဆူလာပြီဆိုရင် ဟင်းအိုးထဲကို ခုနက နွှင်ထားတဲ့ အသားဖတ်လေးတွေထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်ကောင်းမညက်တညက်ထောင်းတို့ကို ထည့်ပြီး ပေးဆူပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆူရင်တော့ ကော်ရည်ဖျော်ထားတာတွေကို ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ ကော်ရည်တွေ လုံးခဲသွားတာမျိုး ဖြစ်မသွားအောင် သေသေချာချာလေး မွှေပေးပါနော်။ ပြီးရင်တော့ မီးအေးအေးနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း ဟင်းအိုးဆူအောင် တည်ထားပေးပါနော်။ ဟင်းအိုးထဲကို ပန်းမုန်လာပွင့်နဲ့ မုန်ညင်းကို စားခါနီးမှ ထည့်စားနိုင်ပါတယ်နော်။ အရသာကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေလောက်မှန်းပြီး ထည့်ထားပါနော်။
မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးလေးတင်၊ ဆီထည့်၊ ဆီပူလာပြီဆိုရင်တော့ နနွင်းမှုန့်လေးနည်းနည်းခပ်ပြီး အသင့်လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီကြော်တွေကို ထည့်ကြော်ပါနော်။ မီးမပြင်းစေဘဲ အသင့်အတင့်နဲ့ အကျက်ညီအောင်ကြော်ပါ။ ရွှေဝါရောင်သန်းလာပြီဆိုရင်တော့ မီးဖိုပေါ်ကနေ ဒယ်အိုးကိုချပြီး ကြက်သွန်ကြော်တွေကို ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲ ဆယ်ယူပါနော်။
မီးအုံးထားတဲ့ ငါးပိစိမ်းစားထဲကို ကြက်သွန်ဖြူထောင်းလေးထည့်၊ သံပုရာရည်ရွှဲရွှဲလေးဆမ်းပေးပါ။ ရေဆေးပြီးသား ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကို မထူမပါးလေးလှီး၊ ဆား၊ သကြားနဲ့နယ်ပြီး သံပုရာရည်လေးနဲ့ နယ်ပေးထားပါနော်။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ပန်းကန်လုံးထဲကို ခေါက်ဆွဲထည့်၊ ကော်ရည်ထည့်၊ အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျှထည့်ပါ။ ပဲပင်ပေါက်ရေနွေးဖျောထည့်၊ ပြီးတော့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေးဖြူး၊ ကြက်သွန်ကြော်လေးထည့်၊ တရုတ်နံနံလေးထည့်ပြီး ပွဲပြင်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ငါးပိမီးကင်သံပုရာရည်ဆမ်း၊ ငရုတ်ချဉ်လေးနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ပူပူနွေးနွေးလေး သုံးဆောင်ပါနော်။
Anonymous May 17, 2008 at 7:54 AM
Could you tell me how to make kaw ye in detail. We find it difficult here.
Nu Thwe November 22, 2009 at 1:26 AM
ကျေးဇူးပဲနော်။ ချက်စားခါနီး recipe လာပြန်ကြည့်တာ။ ရာသီဥတု အေးနေတာနဲ့ ကော်ရည်ပူပူလေး စားမလို့ရယ်။
Anonymous October 22, 2010 at 11:31 PM
ကျေးဇူးဘဲ အစ်မရေ /
ကျွန်တော်က ဒါမျိုးဆိုအကြိုက်ဘဲ။ အိမ်ကလူတွေကို ပညာကုန်သုံးပြီးလုပ် ကြွေး လိုက်အုံးမယ်။
( ET လေး )
NaingYe`Zaw November 9, 2011 at 11:28 AM
ကော်ရည် လုပ်နည်းလေးပါ မျှပါဦး လုလုရေ .
Winston February 25, 2019 at 7:17 AM
This is not the authentic Hokkien lormee I used to have asachild when living in Rangoon. This is the Burmese inspired variation.